Fomba ahoana ny fifandraisana misy eo amin'ny sehatry ny fidiram-bola andiany | Martech Zone
Ahoana ny fomba hitarika ny fifandraisana amin'ny andiany Webinar
Alarobia, Jona 27, 2012 Alahady, Martsa 24, 2013 Jenn Lisak Golding
Nandritra ny volana Jona, ny namako sy ny mpanjifako, Right On Interactive sy TinderBox, dia nanambatra hery hamorona mahafinaritra andian-dahatsoratra webinar momba ny fomba itondran'ny fifandraisana ny vola miditra. Right On Interactive, mpanohana ny Martech Zone, manome a vahaolana amin'ny automatisation marketing miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fandresena, fihazonana ary ny fitomboan'ny fifandraisana. TinderBox dia SaaS rindrambaiko fanolorana varotra an-tserasera izay manamora ny famoronana tolo-kevitra momba ny varotra mirindra sy mifanaraka ho an'ny vinavinanao. Samy manana fahitana mahatalanjona momba ny indostrian'ny varotra sy ny varotra, izay nozarain'izy ireo tamin'ity andiany webinar ity.
Andiany fizarana 3 ity, mifantoka amin'ny ampahany samihafa amin'ny tsenan'ny marketing sy ny varotra isaky ny webinar 30 minitra. Ireto misy fanalahidin'ny fanalahidy isaky ny fivoriana, saingy tokony ho izany tokoa henoy ny andiany hianatra bebe kokoa! Azonao atao koa ny manaraka ny resaka amin'ny Twitter miaraka amin'ny #revwebseries hashtag.
Fizarana 1: Mandoko ny sarin'ny fijerinao
Ireto misy teboka fifanakalozan-kevitra sy lalana azo avy amin'ity tranonkala ity:
Iza no tokony handanianao ny fotoanao hiresahana
"Ny fandraisana ny haitao automatique marketing dia antenaina hitombo 50% amin'ny taona 2015." (Fanapahan-kevitra Sirius)
"50% ny mpitarika mahay no tsy vonona hividy avy hatrany." (Gleanster)
Mifindra avy amin'ny orinasa milaza aminao hoe inona ny olanao amin'ny fanampiana anao hamaha ireo olana hitanao
Ny fomba fividianana firaka dia bebe kokoa momba ny fanantenana
Kalitao mihoatra ny habetsahana (mitarika)
Mamorona serasera mifanaraka sy mifanaraka
Manekena ny loharanom-pahalalana rehetra hahazoana fiovam-po bebe kokoa
Torohevitra momba ny fomba hanombohana (tanjona, mombamomba ny mpanjifa, fitarihana orinasa)
Henoy eto ny Fizarana 1.
Fizarana 2: Mitantara tantara ilay isa
Miresaka momba ny fampifanarahana ny tanjon'ny varotra sy ny varotra
Hamarino fa milamina sy mahomby ary mandaitra ny taratasy zaraina
"47% amin'ireo mpivarotra B2b no milaza fa mety ho latsaky ny 4% amin'ny fitarihana rehetra vokarin'ny marketing, na koa tsy mahalala an'io metrika io." (Fikarohana Forrester)
"Ny olona 12% dia mety hividy aminao raha afaka mamorona fifandraisana ara-pientanam-po ianao." (Poll Gallup)
"Amin'ny taona 2020, ny mpanjifa dia hitantana ny 85% ny fifandraisan'izy ireo nefa tsy miresaka amin'ny zanak'olombelona." (Fikarohana Gartner)
Mampiasa scoring hamantarana sy hahafeno fepetra anatiny
Ny isa dia tokony mifanaraka amin'ny karazana fifandraisana isan-karazany
Ny dingana rehetra dia tokony horaisina amin'ny fomba hafa
Ny isa dia manome fahitana ny tantara iray manontolo - ny lalan'ny fiainana
Henoy ny Fizarana 2 eto.
Fizarana 3: Andao haka manokana
"Ny mpividy B2B dia 70% amin'ny alàlan'ny fizotry ny fividianana alohan'ny hifandraisany amin'ny mpivarotra." (Fanapahan-kevitra Sirius)
Mampifanaraka fitaovana amin'ny fifandraisana
Miresaka momba ny fizarana milamina manomboka amin'ny marketing ka hatramin'ny varotra
Fanajana, fahamendrehana, fandraisana andraikitra
Misarika, Mitaiza, mamadika (fantsona / varotra sy ny fiovan'ny azy ireo)
Traikefa feno marika ho an'ny mpanjifa
Fampiasana teknolojia hifandraisana amin'ny firenena sy anatiny
Mampiova fiovam-po ny data
Ny fifanarahana akaiky noho ny fifandraisana
Mitenena amin'ny sehatra iray
Ny fotoana ahazoana manokana dia mitaky 70% amin'ny alàlan'ilay fizotrany
Henoy ny Fizarana 3 eto.
Makà fotoana ary henoy ity tena mahafinaritra ity andian-dahatsoratra webinar - tsy hanenenanao izany!
Tags: fifandraisana-barotraMarketing WebinarfifandraisanaFidiram-bolamahitsy amin'ny interactiveFanamafisana ny varotratinderbox
Paikady marketing amin'ny finday 10
Formstack: Vaom-pifandraisana eken'ny mpanjifanao